Aísa Gungwa Rine Simba. Kubvunzana nemunyori we Ndiani Akaona Mermaid? | Zvazvino Zvinyorwa
Photography: nerubatsiro rwa Mar Aísa Poderoso.
Aísa Gungwa Rine Simba Iye anobva kuZaragoza, purofesa ane degree muHistory uye munyori. Nhoroondo yake yazvino ndeye ¿Ndiani akaona ngoni? Mune izvi indavhiyu Iye anotiudza nezvake, rake basa, zvido uye mapurojekiti. Kutenda kuzhinji nekuda kwetsitsi dzako uye nenguva yako.
Mar Aísa Poderoso - Bvunzurudzo
BHUKU TODAY: Yako nyowani nyowani yakanzi ¿Ndiani akaona ngoni? Chii chaunotiudza nezvazvo uye iyo pfungwa yakabva kupi?
GUNGWA RIMASIMBA AÍSA: Iyo kesi yechipiri yehama dzeCárdenas, dzinogona kuverengerwa zvakasununguka pane yekutanga, Dostoevsky muhuswa. Iwo ndiwo matsva emanoir novel, akaiswa kunyanya muLogroño, iro guta randakagara kwemakore makumi maviri nematanhatu, uye nyeredzi Diego Cárdenas, mutevedzeri wemukuru wemapurisa uye hanzvadzi yake, Lucía, muturikiri. Ivo vaviri vari panguva yakaoma, vasingafari nehupenyu. Chaizvoizvo kutsigirana kwavo uye kuomarara kwavo mukugadzirisa nyaya kuchavatungamira kuti vazviwane ivo, zvishoma nezvishoma.
Kune zvakare akasiyana ma microcosms ane vechipiri vatambi vakahwina rudo rwevaverengi sa coroner, mapurisa anoshanda pamwe naDiego, kana aLucía kubazi rekushandura. Ini ndakatanga kunyora iyi yechipiri kesi, kunyangwe ndisati ndatsikisa rungano rwekutanga, nekuti ini ndaive nechokwadi kuti vanhu ava vaive nerwendo rwakawanda; Ini pachangu ndaida kuziva mafambiro avaizoenda.
Kutanga kwemanoveli angu kazhinji kunouya kwandiri nemufananidzokupenya. Mune ino kesi yaive iyo yemumwe mermaid pane iyo Gothic façade yeSan Bartolomé, kereke yakanaka iri pakati peLogroño. Ikoko ipapo inoverengeka inotanga. Akasangana nedambudziko rekuchengetedza hunhu hwekutanga, asi achihupa hutsva.
Mune ino kesi, Diego anotarisana nechitarisiko chevaviri vakwegura vakaroora pamba pake, mune inoita kunge yakajeka nyaya yemhirizhonga pakati pevakadzi. Kuwanikwa kwetsamba dzekare dzakavanzwa mutafura yekupfekedza, pamwe nehurongwa umo mamwe mamisheni asinganzwisisike ane svikiro anoonekwa, zvinotungamira mukuferefetwa. Marongero enoverengeka anotitorerawo kunzvimbo dzakadai Paris kana Zaragoza, guta rekumusha kwangu, mune iyo chiitiko chinogara chichiitika.
Vaverengi vava kutotumira ini zvavanofunga; Ivo vanochida uye vari kukoshesa chiyero pakati pechinhu chinonakidza, vatambi vavanonzwa kugadzikana navo uye vanoda kusangana, iwo mamiriro uye nemanzwiro. Zvinotaridza zvakakosha kwandiri kuti, pamusoro pechirongwa, muverengi anokwanisa kunakidzwa nekuwana zvimwe zvinhu zvinoramba zvichingonzwika kana zvapera. Kumwe kusarudzika ndeye mareferenzi kune hunyanzvi, nhoroondo kana yechinyakare cinema, Yakapindirwa munyaya yacho pachayo.
Ini ndinoda kuti ivo vanondiudza kuti ivo vanoda kuipedza kuti vawane chakavanzika, asi icho, panguva imwechete, vanovanzwira tsitsi nekuti vanonzwa kugadzikana mukati mekanoverengeka. Ini handizoburitse zvakawanda, zvirinani kuti vaverengi pachavo vazvionere vega.
MAP: Ini ndinonyora nekuti ndiri muverengi. Muverengi anga achive uye ari kufara kwazvo kuverenga kubva achiri mudiki. Ndisati ndadzidza kuverenga, ndinorangarira nyaya dzandakamboudzwa naambuya vangu ndisati ndarara. Ipapo kwakauya iyo kufa-kucheka ngano dzaFerrándiz. Gare gare Enid Blyton, Victoria Holt… Uye, pakupedzisira, kusvetukira kumazana emabhuku aive nababa vangu muchitoro chemabhuku. Hapana mubvunzo, Agatha Christie Kwaive kuwanikwa kukuru. Gare gare kwakauya vamwe vanyori vakaita sa Pearl S. Buck, Leon Uris, Mika Waltari, Colette, nezvimwe. Kubva pakutanga chaiko ndakajaira kuenda nababa vangu Chishanu chega chega kuchitoro chemabhuku nekutenga mabhuku maviri evhiki. Saka ndakatangawo kugadzira raibhurari yangu ndega. Ndinozvirangarira semufaro wakachena.
Ini ndakanyora nyaya yangu yekutanga ndiine makore manomwe, mune yechipiri EGB. Ini ndinorangarira nekuti kosi iyoyo mudzidzisi wangu akandipa kuti ndiverenge kumba kopi yake ye The Little Prince; Ndainzwa semusikana anofara kwazvo pasi pano. Izvi zvakandikurudzira kunyora nyaya dzangu ndega mukabhuku kakarongedzwa naamai vangu nebepa regirini neblue.
Munguva kuyaruka, mune mamwe makirasi maive makatiomera kuti tirambe tichiteerera, akanyora kudaro Nyaya dzerudo kune vamwe vangu, vakagara munyika yavakasarudza, zvimwe zvese zvaive mumafungiro angu. Zvinonzwisisika, iri rudzi rwandisina kutamba zvakare.
Kudzoka mukati 2001 Ndakafunga kunyora yangu yekutanga novel. Zvekudzidziswa kwangu kwe BA muNhoroondo Ndakakwezvwa neiyo nhoroondo yemhando. Ndakamuendesa kumubhadharo wepamusoro, uyo, zvechokwadi, ini handina kuhwina. Nekudaro, ini ndainakidzwa chaizvo nerwendo irworwo rweMadrid rwekupa-ruoko-kuendesa iro runyorwa kune iye muparidzi pacharo. Chaive chiitiko chinonakidza uye chisingakanganwiki.
MAP: Ini handina kukwanisa kusarudza imwe; Ndakafadzwa nevanyori vazhinji, vane mabhuku andakaverenga panguva dzakasiyana uye nenguva muhupenyu hwangu.
Ini ndinoda zvinyorwa zveXIX uye yekutanga hafu yeXX: Jane Austen, all Brönte, Flaubert, Stendhal, Balzac, Oscar Wilde, Tolstoy, Dostoevsky, Emilia Pardo Bazán, Clarín, Wilkie Collins, Edith Wharton, Scott Fitzgerald, Forster, Evelyn Waugh, Agatha Christie kana Némirovsky.
Pedyo nenguva, ndinogona kudoma sevamwe vakawanda: Isabel Allende, Carmen Martín Gaite, Paul Auster, Donna Leon, Pierre Lemaitre, Fred Vargas nevamwe vazhinji. Ivo vese vane zvakafanana kuti vakaita kuti ndifare, kuratidza kana kundifambisa. Mumwe nemumwe wavo akasiya chinyorwa kwandiri; Ndadzidza kubva kune vese. Mukupedzisira, maitiro emunyori anovakwa kubva pahunhu hwake, zviitiko uye, zvekare, kuverenga.
MAP: Ini ndichasarudza maviri: Ana Karenina, yaaizoita hurukuro pamusoro pehupenyu nerudo. Ndinoda kufamba naye mumigwagwa yeSt.
Humwe hunhu hwandinoda kunakidzwa naye manheru huri nehukuru Gatsby. Handidi kushanya kuNew York nekambani yako. Ivo vanoita senge kwandiri vanonakidza mavara, azere nemwenje uye mimvuri, yemanoki uye crannies, emhando.
MAP: Ndinoifarira, kana zvichigona, nyora wega uye wakanyarara, asi ini ndinochinja. Seye anecdote ini ndichakuudza izvozvo Ndiani akaona ngoni? Ndakaipedzisa muZaragoza, ndakagara pasofa, ndakasungwa kuseri kwematiresi mukamuri rakazara, apa murume wangu nevana vakapenda nekuunganidza fanicha. Dzimwe nguva haugone kusarudza.
Kuti ndiverenge ndinongoda bhuku rakanaka, vamwe vese havana basa neni.
MAP: Kune nzvimbo dzandinotarisa zvirinani. Mumba mangu Logroño Ndine zvishoma desktop pamberi pehwindo kuburikidza nako ndinoona miti ichizungunuka uye vanhu vachiuya voenda; Iyi inzvimbo inondipa kudzikama uye kwandinonyatsogadzikana. In Zuva, Ndinonakidzwa chaizvo nekunyora mumba mangu muMedrano uko ini ndine zvimwe zvakanaka Mountain View. Ikoko ini ndakatanga Ndiani akaona ngoni? Zvisinei,, Dostoevsky muhuswa Yakasimuka panguva yezororo muVinarós. Iyo Mar zvinokurudzirawo zvikuru.
Nezve iyo nguva yezuva, ini ndinofarira kunyora pa mangwanani-ngwanani, apo munhu wese achakarara uye mumba makanyarara. Imwe nguva yandinowanzo tora mukana ndeye masikati. Hazvina kumboitika manheru, ipapo ndinosarudza leer. Mune yangu kesi, kuverenga kunondisimbisa kuti ndirambe ndichinyora. Icho chiitiko chezuva nezuva.
Ini ndiri mudzidzisi uye ndinofanira kuyananisa basa rangu uye hupenyu hwemhuri, asi Ndinoedza kunyora mazuva ese, kunyangwe ari mashoma mazwi. Ndinotenda, pasina kupokana, kuti iwe unogona kugara uchiita nguva yezvaunofarira uye zvaunofarira.
MAP: Semuverengi ndinoda iyo rondedzero uye ndinonakidzwawo ne nhoroondo yenhau. Ini handitonge kunze kwekuzvivhura ini rimwe zuva semunyori ane aya marudzi.
MAP:Ndiri kuverenga Instinct, rakanyorwa naAshley Audrain. Iyo inoverengeka inonakidza, chaiyo yekutanga. Kunakidzwa kwepfungwa kunotaura nezvekuva amai uye kunomutsa, hakusiye kusava nehanya. Kubva pakuona kwenyaya, kushandiswa kwemunyori mumunhu wekutanga newechipiri kunonakidza kwazvo, pamwe nekusvetuka kwenguva. Ndinozvikurudzira, pasina kupokana.
Ndine nyaya yechitatu yehama dzeCárdenas, iri muchirimo. Dostoevsky muhuswa inotanga mumatsutso uye Ndiani akaona ngoni? munguva yechando. Zvisinei, ndine mazano matsva anoputika mumusoro mangu. Kune munyori pane nguva inonakidza: paunofunga iwe unogona kuve padhuze nenyaya yakanaka.
MAP: Hapana mubvunzo kuti iyo chiyero chekutsikisa es vertiginous. Kune akati wandei akasimba ekudhinda mapoka ayo anotonga pamusika uye vazhinji vevashambadzi vadiki nepakati vapikisi vanofanirwa kukwikwidza nemhando yepamusoro kana nechisarudzo chakasarudzika. Zvisinei, ichokwadi kuti kune nzira dzakasiyana idzo munyori asingazivikanwe anogona kusvika nadzo kuburitswa kwemabhuku ake. Izvo hazvina kumbove nemikana yakawanda uye mikana sezvazvino. Mushure mekuburitswa, rwendo runotanga umo munyori anofanirwa kuve zana muzana vanobatanidzwa. Pasina kupokana, pasocial network chinhu chakakosha kubatana kuti uzviite unozivikanwa uye kusimudzira mabhuku ako. Isu tese tinoziva kuti hazvisi nyore uye kuti kupihwa kwakakura, asi kwandiri, muverengi wese anoisa nguva yake nemari mubhuku rako mubairo unoshamisa Izvo zvinopfuura zvinotsiva kuedza kwakadyarwa.
Mumoyo mangu chishuwo changu chaive chekuburitsa, pachena. Munyori anonyora nekuti anoifarira, nekuti anoda iyo nguva yekugara pasi kuti agadzire vatambi uye nyaya, nekuti anozvida sekufema. Asi, pamusoro pezvose, nyora kuitira kuti vaverenge, kuitira kuti vamwe vagonewo kunakidzwa nenyaya dzavo.
Ichokwadi kuti kutsikisa kwakaratidzika kunge kusingasvikike kwandiri. Kwenguva yakareba ndakazvipira kuti ndinyore nenzira yakavanzika kwazvo, murume wangu chete ndiye aiziva. Ndiye muverengi wangu wekutanga, anotsoropodza munzira yakanaka, ndosaka ndichivimba nekutonga kwake. Dzimwe nguva, chimwe chinhu chinofanira kuitika chinokusundira iwe kuti utore nhanho yekutanga. Mune yangu nyaya, kwaive kurasikirwa kwevanhu vaviri vandaida kwazvo munguva pfupi. Panguva iyoyo ndanga ndave kunyatsoziva kuti kune poindi muhupenyu yekusadzoka. Kana zvese zvapera, iwe unongotora izvo zvawakararama, izvo zvaunakidzwa, izvo zvaunoda. Ndakafunga kuti ndaisada kudemba kana nguva dzainge dzaenda uye kuti hapana chandaizorasikirwa nekuyedza.
Ichokwadi icho kune vanhu vazhinji vanonyora uye vanoda kutsikisa, isu tinofanirwa kuve vechokwadi. Ndiwo mujaho wedaro refu mairi unofanirwa kutora matanho, shingirira uye ushande zvakanyanya mariri.
MAP: Isu tiri munguva yakaoma, ndingangodaro ndichiti mukuchinja kwenguva. Semunyori wenhoroondo ndinoziva kuti matambudziko anoitika, kunyangwe kana zvakaoma kwazvo paunenge uchizvirarama, uye kuti mumashure nguva dzakanaka dzinogara dzichiuya. Zvirinani, ndinozvishuvira kuzvizvarwa zvitsva. Nezve zvinyorwa, hunyanzvi kana mumhanzi, pamwe mabasa anoshamisa kwazvo akamuka munguva dzine rima. Tsika yakajeka, inogara ichiponesa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Aísa Gungwa Rine Simba. Kubvunzana nemunyori we Ndiani Akaona Mermaid?